सचेत भएर जिउनु आवश्यक छ ! | Kendrabindu Nepal Online News
सचेत भएर जिउनु आवश्यक छ !
२५ बैशाख २०७७, बिहीबार १९:०२
वर्तमान कठिन परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै प्रेम रावतको प्रयास मानिसहरूले आफूभित्र हिम्मत र सजगताको भावना विकास गरून् भन्ने नै हो । यसका लागि उहाँले भिडियोका माध्यमद्वारा हरेक दिन मानिसहरूलाई एउटा नयाँ सन्देश प्रदान गरिरहनु भएको छ । प्रस्तुत छ उहाँको सन्देशको केही अंश :
हामी धेरै कुरा सुन्छौँ । यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ तर भित्र डर हुन्छ– मलाई के हुने हो ! यो समय डराउनका लागि होइन । यो समय त ध्यानपूर्वक काम गर्नका लागि हो । शान्तिपूर्ण तबरमा काम गर्नका लागि हो । जसले गर्दा यो समयको पूर्ण रूपले फाइदा लिँदै आनन्दसँग, सुरक्षित तरिकाले रहन सकौं र यो समय बितेर जाओस् । अनि, आगामी दिनमा यो रोग (कोरोना भाइरस वा कोभिड–१९) को कुनै न कुनै समाधान निस्कियोस् । कुरा त त्यतिखेर सम्मको मात्रै हो । यो कसरी सम्भव हुन्छ ? यो बुझ्नु पर्ने कुरा छ ।
त्यसका लागि मानिसहरूले बताइरहेका छन्– आइसोलेसन (छुट्टै बस्नुपर्ने अवस्था) मा बस्नुपर्छ । यो राम्रो कुरा हो तर यो समयावधि आनन्दसँग बितोस्, यो कसरी सम्भव हुन्छ ? यसका लागि कुनै अरूथोक नभएर तपाईंलाई तपाईंको आफ्नै आवश्यकता छ । किनकि, तपाईंभित्र गुण पनि छ र अवगुण पनि छ । तपाईंभित्र त्यो चीज पनि छ जसले तपाईंलाई दुःख दिन्छ । अनि, तपाईंभित्र त्यो चीज पनि छ जसले तपाईंलाई आनन्दविभोर तुल्याइदिन्छ । कुरा के हो भने हामी कुन चाहिँलाई छनोट गर्छौं !
यो संसार एउटा शपिङ मल (बजार) हो । अनि, तपाईंलाई चिट्ठा परेको छ । तपाईं यस शपिङ मलमा हुनुहुन्छ । तपाईं यहाँ हरेक चीजको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ । तर, जाने समय आएपछि तपाईंले आफूसँग कुनै पनि चीजलाई लैजान पाउनु हुन्न । यस्तो कानुन छ । तथापि तपाईं चीजबीजलाई यसरी जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ । जस्तो कि तपाईं यसलाई साथैमा लिएर जान पाउनुहुन्छ । तर, लिएर जान सक्नुहुन्न । अनि, के गर्नुहुन्छ ? एउटै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ– त्यो हो, तपाईं आफ्नो जीवनमा यहाँ रहुन्जेलसम्म पूरा फाइदा लिन सक्नुहुन्छ । आनन्द लिन सक्नुहुन्छ । त्यसो हो भने के मेरो जीवन आनन्दसँग बितिरहेको छ कि छैन ?
सबैजसो भविष्यको कुरा गर्छन् । तर, यही समयको कुरा कोही पनि गरिरहेका छैनन् । म यही समयको कुरा गर्न चाहन्छु । किनकि, यो समय यी दुई पर्खालको बीचमा छ । एउटा पर्खाल, जहाँ तपाईं यो संसारमा आउनु भएको छ । अनि अर्को पर्खाल, जहाँबाट अर्कोतिर तपाईं कहाँ जानुहुन्छ, यो कुरा कसैलाई पनि थाहा हुने छैन । यी दुई पर्खालका बीचमा तपाईंसँग यो जुन समय छ, त्यो हो– तपाईंको जीवन । जसलाई तपाईं दुःखी भएर पनि बिताउन सक्नुहुन्छ र सुखी भएर पनि बिताउन सक्नुहुन्छ । यदि तपाईंले यसलाई रुँदै–रुँदै बिताउनुभयो भने तपाईंलाई दुःख नै हुन्छ । यदि तपाईं यसलाई आनन्दका साथ बिताउनुहुन्छ भने आनन्द प्राप्त हुन्छ, सुख प्राप्त हुन्छ ।
म चाहन्छु, तपाईंको जीवनमा सुख होओस् । यो कठिन परिस्थितिमा पनि तपाईंको जीवनमा आनन्द हुनुपर्छ र आनन्द सम्भव छ । तपाईंले आगामी समयमा के गर्नुपर्छ, स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ । “कसरी तपाईंले धैर्य गर्नुपर्छ ! कसरी तपाईंले साहसका साथ काम गर्नुपर्छ !” यी कुरा यो समयमा अत्यन्तै आवश्यक छ । किनकि, डराएर त आँखा बन्द हुन्छ । जब हिम्मत आउँछ तब आँखा खुल्छ । के गर्नुपर्छ ? के गर्नु हुँदैन थाहा हुन्छ ।
आफूलाई अलग्गै (आइसोलेसनमा) राख्नुहोस् अनि एकान्तवास (लकडाउन) को पालना गर्नुहोस् । यसबाट यो रोग कम फैलिन्छ । हात धुनुहोस् अनि एक–अर्कासँग कमसेकम ६ फिटको दुरीमा रहेर बस्नुहोस् । यी कुराहरू त तपाईंलाई त्यो रोगबाट बच्नका लागि हुन् तर जुन उदासीनताको रोग छ, भ्रमित हुने बिमारी छ त्यसबाट कसैले बचाउन सक्छ भने त्यो हो– “तपाईं” । त्यसका लागि तपाईंलाई “तपाईं” कै आवश्यकता पर्छ । त्यसैले आफूभित्र भएको त्यो शक्तिलाई चिन्नुहोस् । त्यो शान्तिलाई चिन्नुहोस् अनि आनन्दमा रहनुहोस् ।
(प्रेम रावत मानवता एवम् शान्तिका विषयमा चर्चा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ । उहाँलाई यस कार्यका लागि थुप्रै संस्थाहरूद्वारा शान्तिदूतको उपाधि पनि प्रदान गरिएको छ । आफ्नो सन्देशको चर्चाका अतिरिक्त उहाँले “द प्रेम रावत फाउन्डेसन” नामक एउटा परोपकारी संस्था पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ । यस संस्थाका थुप्रै कार्यक्रमहरूमध्ये “जनभोजन” पनि एक हो । यसबाहेक यस संस्थाले यस्तो विपत्तिमा पनि विपन्न मानिसहरूलाई राहतको सामग्री बाँड्ने कार्य गरिरहेको छ । उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारीका लागि www.premrawat.com र प्रतिक्रियाका लागि agps@mos.com.np लाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)
आवश्यक छ’, सचेत भएर जिउनु
Prevबजेट : महामारीबाट जोगाउने र आत्मनिर्भर तुल्याउने हुनुपर्छ
काँग्रेसद्वारा विज्ञहरुसँग छलफलNext